ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်များကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ လမ်းပေါ်ထွက် တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ Rဇာနည်တို့ ဂီတအနုပညာရှင်လောကသားများ – Online News Post
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်များကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ လမ်းပေါ်ထွက် တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ Rဇာနည်တို့ ဂီတအနုပညာရှင်လောကသားများ
လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ အခြေ အနေ တွေမှာ ဆိုရင် တော့ ပြည်သူတွေ အပြင် အနုပညာရှင် တွေ နဲ့ ဂီတ လောက သားတွေ ကပါ လမ်းပေါ် ထွက်ပြီး လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေ ကို လုပ်ဆောင် နေကြတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ အနုပညာရှင်များ အဖွဲ့က နေ့တိုင်း လိုလို ပြည်သူ လူထု တွေနဲ့ အတူ တက်တက် ကြွကြွ ပါဝင် သလို ဂီတ လောက သားတွေ ကလည်း သူတို့ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက် က နေ ပါဝင် အားဖြည့် ပေးနေကြ တာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဂီတ အနုပညာ ရှင်များ အဖွဲ့မှာ တော့ တေးသံရှင် တွေ အများအပြား ပါဝင်ကြ တာ ဖြစ်ပါ တယ် … .
မျိုးကျော့မြိုင် ၊ R ဇာနည် ၊ ရန်ရန်ချမ်း ၊ ဖိုးကာ ၊ ဇော်ပိုင်၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလိုင် ၊ ကျားပေါက် ၊ G Fatt ၊ ဖြိုးလေး ၊ ဖြိုးပြည့်စုံ ၊ ထက်ယံ ၊ ဘီလီ လမင်းအေး ၊ ပိုပိုနဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး စတဲ့ နာမည် ကြီး တေးသံရှင် တွေပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့က မနေ့ ကလည်း လမ်းပေါ်ကို အတူတူ ထွက်ပြီး ကြွေးကြော်ခဲ့ ကြတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဂီတ အနုပညာ ရှင်တွေအားလုံးက စုပေါင်း ပြီး ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင် တွေကို ပြန်လွှတ် ပေးဖို့ ငြိမ်းချမ်း စွာ တောင်းဆို ပေး ခဲ့ကြ တာပဲ ဖြစ် ပါတယ် … .
ဂီတ အနုပညာရှင် များအဖွဲ့ က မြန်မာ ပလာဇာ အရှေ့မှာ ထိုင်ပြီး သူတို့ ရဲ့ ကြွေးကြော် သံတွေ ကို အားလုံး ကြားစေရန် စည်းလုံး ညီညွတ်စွာ လူထု လှုပ်ရှားမှု ပြု လုပ် ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပြည်သူ တွေနဲ့ အတူ တစ်သားတည်း ရပ်တည် နေကြ တဲ့ ဂီတ အနုပညာရှင် တွေက အခုချိန် မှာ တစ်ထောင့် တစ်နေရာ ကနေ ပါ ဝင်အားဖြည့် ပေးနေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ကဲ ဖမ်း ဆီး ထိန်းသိမ်း ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင် များအား ပြန် လည် လွတ်မြောက် ပေးရန်အတွက် တောင်းဆို ခဲ့ကြတဲ့ ဂီတအနုပညာရှင် များ ရဲ့ပုံရိပ် တွေကို ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက် ပါ တယ် နော် … .
လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ အေၿခ အေန ေတြမွာ ဆိုရင္ ေတာ့ ျပည္သူေတြ အျပင္ အႏုပညာရွင္ ေတြ နဲ႔ ဂီတ ေလာက သားေတြ ကပါ လမ္းေပၚ ထြက္ၿပီး လူထု လႈပ္ရွားမႈေတြ ကို လုပ္ေဆာင္ ေနၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အႏုပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕က ေန႔တိုင္း လိုလို ျပည္သူ လူထု ေတြနဲ႔ အတူ တက္တက္ ႂကြႂကြ ပါဝင္ သလို ဂီတ ေလာက သားေတြ ကလည္း သူတို႔ တတ္နိုင္တဲ့ ဘက္ က ေန ပါဝင္ အားျဖည့္ ေပးေနၾက တာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဂီတ အႏုပညာ ရွင္မ်ား အဖြဲ႕မွာ ေတာ့ ေတးသံရွင္ ေတြ အမ်ားအျပား ပါဝင္ၾက တာ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
မ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္ ၊ R ဇာနည္ ၊ ရန္ရန္ခ်မ္း ၊ ဖိုးကာ ၊ ေဇာ္ပိုင္၊ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိုင္ ၊ က်ားေပါက္ ၊ G Fatt ၊ ၿဖိဳးေလး ၊ ၿဖိဳးျပည့္စုံ ၊ ထက္ယံ ၊ ဘီလီ လမင္းေအး ၊ ပိုပိုနဲ႔ ဝါဆိုမိုးဦး စတဲ့ နာမည္ ႀကီး ေတးသံရွင္ ေတြပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕က မေန႔ ကလည္း လမ္းေပၚကို အတူတူ ထြက္ၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ ၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဂီတ အႏုပညာ ရွင္ေတြအားလုံးက စုေပါင္း ၿပီး ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံထားရတဲ့ အႏုပညာရွင္ ေတြကို ျပန္လႊတ္ ေပးဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ေတာင္းဆို ေပး ခဲ့ၾက တာပဲ ျဖစ္ ပါတယ္ … .
ဂီတ အႏုပညာရွင္ မ်ားအဖြဲ႕ က ျမန္မာ ပလာဇာ အေရွ႕မွာ ထိုင္ၿပီး သူတို႔ ရဲ့ ေႂကြးေၾကာ္ သံေတြ ကို အားလုံး ၾကားေစရန္ စည္းလုံး ညီညြတ္စြာ လူထု လႈပ္ရွားမႈ ျပဳ လုပ္ ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ျပည္သူ ေတြနဲ႔ အတူ တစ္သားတည္း ရပ္တည္ ေနၾက တဲ့ ဂီတ အႏုပညာရွင္ ေတြက အခုခ်ိန္ မွာ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာ ကေန ပါ ဝင္အားျဖည့္ ေပးေနတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ကဲ ဖမ္း ဆီး ထိန္းသိမ္း ခံထားရတဲ့ အႏုပညာရွင္ မ်ားအား ျပန္ လည္ လြတ္ေျမာက္ ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကတဲ့ ဂီတအႏုပညာရွင္ မ်ား ရဲ့ပုံရိပ္ ေတြကို ျပန္လည္ မၽွေဝ ေပးလိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post MRTVနဲ့ မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားတို့ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ စာ
Next post ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ရှေ့မှာ မေတ္တာပို့ ပရိတ်ရွတ်နေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်